Motorola P40 iyo Moto Z4 Play waxaa lagu sifeeyay waxa ay bixiyeen | Androidsis
Motorola P40 iyo Moto Z4 Play ayaa lagu sifeeyay waxa ay soo gudbiyeen
Naqshadeynta Motorola P40 iyo Moto Z4 Play oo ay weheliso qeexitaankiisa ayaa usbuucii hore lagu daadiyay shabaqa. Hadda, noocyada sanduuqa daadanaya ee Motorola P40 iyo Moto Z4 Play ayaa soo ifbaxay si loo xaqiijiyo xogta horey loo duubay.
Marka xigta, waxaan ku tusaynaa ka bixinaya labadan qalab dhawaanahan waxaa laga sifeeyay khadka tooska ah.
1 Motorola P40 - Bixiyeyaal
2 Motorola Moto Z4 - Bixiyayaal
Motorola P40 - Bixiyeyaal
Madfacyada kiiska Motorola P40 ayaa shaaca ka qaaday in dhabarka taleefanka soo bandhigi doona qalab laba-geesood leh oo toosan iyo dalool astaanta Motorola oo ay weheliyaan iskaanka sawirka faraha. Joojinta qalabka '3,5mm Jack Jack', kuwa ku hadla asalka, iyo dekedda USB-C ayaa lagu arki karaa sanduuqa P40.
Motorola P40 ayaa noqon doona taleefankii ugu horreeyay ee shirkaddu ku timaaddo shaashad daloollansida taleefannada casriga ah Huawei New 4, Maamuus V20 y Samsung Galaxy A8s in la bilaabay dhawaan. Xanta ayaa leh in ay soo bandhigi doonto shaashad 6.2-inji ah oo LCD ah.
Waxaa la filayaa in Snapdragon 675 chipset awood 64 iyo 128GB daabacaadda taleefanka oo leh 6GB RAM. Waxay u badan tahay inay ku jiri doonto batari dhan 4,132 Mah. Astaamaha kale ee xanta taleefanka waxaa ka mid ah qaabeynta laba kamaradood, sidaan soo sheegnay, 48 megapixels + 5 megapixels xaga dambe ah, toogashada hore ee 12-megapixel iyo taageerada isku xirnaanta NFC. Waxay noqon doontaa qalab Android One ah oo ku shaqeynaya daabacaadda keydka Android 9 Pie.
Motorola Moto Z4 - Bixiyayaal
Moto Z4 Ciyaar bixi
Guryaha kiisaska Moto Z4 Play ayaa shaaca ka qaaday inay soo bandhigi doonto goos goos wareeg ah oo loogu talagalay kamaradda dambe. Xantu waxay leedahay, si ka duwan qaabeynta labada kamaradood ee taleefanka hore ee Moto Z3 Play, soo socda Z4 Play ayaa soo bandhigi doona hal kamarad gadaal ah.
Majiro googoyn skaanka faraha ee Moto Z4 Play, oo tilmaamaya inay noqon karto mid kamida taleefanada ugu horeeya Motorola ee ku qalabeysan aaladda sawirka faraha. Kiiska Z4 Play ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa gooyo loogu talagalay maqalka codka ee '3,5mm', codka ku hadla, iyo USB-C.
Warbixinadii hore v waxay soo jeediyeen in Moto Z4 Play uu la imaan doono 16-pin pogo isku xiraha si loogu dhejiyo Qalabka Moto Mods xagga dambe, sida moodelladii hore. Si la yaab leh, dadka kiiska soo saaray ma muujinayaan wax isku mid ah oo loo hayo.
Taleefanku wuxuu soo bandhigi doonaa soo bandhigid biyo ah oo leh jilic hoose oo caato ah. Waxaa la filayaa inay la timaado shaashad AMOLED oo 6.2-inji ah. Waxay u badan tahay inay ku shaqeyn karto Snapdragon 670 chipset ama Snapdragon 675.
(Xigasho: 1 y 2 | Via)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola P40 iyo Moto Z4 Play ayaa lagu sifeeyay waxa ay soo gudbiyeen
Nokia 8 Sirocco ayaa ugu dambeyntii loo cusbooneysiiyey Android Pie
Waa rasmi: Galaxy S10 waxaa la soo bandhigi doonaa Febraayo 20